Amazinyo aba mhlophe abahlinzeki bokufinyelela neFektri | I-China Teeth imhlophe Abenzi bokufinyelela
ayikho i-peroxide hp noma i-cp gel amazinyo okwenza mhlophe ngesirinji
Le modeli iyikhithi yokugcoba yamazinyo yobungcweti ye-salon noma yomtholampilo wamazinyo, sine-hp, cp noma i-peroxide ongayikhetha, sisekela insizakalo ye-logo logo ye-oem, sifuna abasabalalisi, uma unentshisekelo kuyo, sicela uthumele uphenyo ku thina, sizophendula ngokushesha.
ikhwalithi ephezulu yekhwalithi yamazinyo emhlophe ephezulu ngepeni
Le khithi eyisibonelo yokwenza mhlophe kwamazinyo iyisazi esishisa kakhulu sokuthengisa amazinyo salon, inepeni lokugaya amazinyo ngaphakathi, kuzoba lula ukusebenzisa i-gel yokwenza mhlophe wamazinyo, sisekela i-oem service.we singangeza uphawu lwakho lomkhiqizo ephaketheni.
xubha up umunwe sula amazinyo mhlophe ijeli
Lo mkhiqizo oyisibonelo ukusula ngomunwe, futhi kungabizwa ngokuthi ibhulashi lomlomo, kusetshenziswa kakhulu ekwelashweni okwenziwa mhlophe kwamazinyo, impahla yayo iyindwangu engalukanga, kulula ukugeza amazinyo ngaphambi kwamhlophe amazinyo.
Umshini wokupholisha amazinyo wamhlophe mhlophe
Lo modeli umshini omncane wenzelwa ukuhlanzeka nsuku zonke ngomlomo, kuyasebenza ekususeni amabala anenkani ezinyo, kungathuthukisa umlomo, kushise okuthengisa amazinyo ukupholisha umshini.
Umhlahlandlela womthunzi wamazinyo mhlophe
Umhlahlandlela womthunzi ungowokuqhathanisa ngaphambi nangemva komphumela ngenkathi ukwelashwa kwamhlophe kwamazinyo, ungabona ukuthi mangaki ama-shades enza mhlophe ngemuva kwamazinyo mhlophe. Kulula ukuyisebenzisa futhi kumele uyidinge ibhizinisi lamazinyo okwenza mhlophe.
kakhukhunathi amalahle amazinyo enza mhlophe impuphu kakhukhunathi amalahle
Lo mkhiqizo usetshenziselwa ukusetshenziswa kwansuku zonke amazinyo enhlanzeko yomlomo nsuku zonke, isithako sawo esiyinhloko ngamalahle kakhukhunathi, aphephile futhi asebenzayo, sisekela i-oem, engeza uphawu lomkhiqizo kumkhiqizo.
ukusetshenziswa kwekhaya kwe-mint ukunambitheka kwamazinyo mhlophe
Le ndlela yokuhlwaya yamazinyo imodeli eyokusetshenziswa kwasekhaya ukunakekelwa kwamazinyo okwenziwa mhlophe nsuku zonke, ungayisebenzisa nsuku zonke, inama-PC ama-14 amazinyo okwenza mhlophe ngaphakathi, singangeza uphawu lwe-brand, wenze ngokwezifiso iphakethe.
Ikhithi yokuxhuma amazinyo ye-USB yokusetshenziswa kwasekhaya
Le modeli yokwenza mhlophe ikhithi isetshenziselwa ukusetshenziswa kwasekhaya, inama-pcs amathathu amazinyo okwenza mhlophe ngaphakathi, isixhumi se-usb singaxhuma ku-android noma i-apula, ijeli elenza amazinyo abe ne-hp, cp noma i-peroxide engekho, noma i-pap gel, singakwazi ilogo yakho yomkhiqizo ivuliwe.
amazinyo amhlophe umlomo wethreyi ene-gel esetshenzisiwe
Le tray yomlomo oyimodeli ine-gel esetshenzisiwe, iphakethe langaphandle liyisikhwama se-foil, singenza amazinyo abe mhlophe ijeli ngamalahle amnyama ijeli noma i-gel emhlophe, i-hp noma i-cp noma i-gel ye-peroxide engekho.
igolide umbala amazinyo mhlophe ipeni 2ml / 4ml
Le modeli yamapeni amhlophe mhlophe anombala ohlukile, imvamisa igolide, isiliva noma okusobala, ine-2ml noma i-4ml, singayenza nge-cp noma i-hp noma i-peroxide gel, noma i-pap gel. ukuthola eminye imininingwane.
ijeli mhlophe ijeli 3ml 5ml 10 ml hp cp noma ayikho i-peroxide
Le syringe yamazinyo okwenza mhlophe ukuthengisa okushisayo okujwayelekile, futhi sinevolumu ehlukile, i-3ml, i-5ml, i-10ml, singayenza ngohlobo olwehlukile lwejel, njenge-hp noma i-cp noma i-peroxide gel, noma i-pap gel.
Amazinyo enjoloba angokwemvelo aba mhlophe
Amazinyo enjoloba i-retractor emhlophe isetshenziswa ezinsizeni ezenza mhlophe amazinyo noma ekuhlinzweni kwamazinyo, Vikela izicubu zomlomo ezithambile (izindebe nolimi), Thuthukisa amazinga enduduzo eziguli, unciphise ukwesaba kwesiguli.